Imikhiqizo yobisi ziwusizo kakhulu emzimbeni wethu. Futhi entendeni fanele Yiqiniso, ushizi. Nguye lowo ophethe irekhodi okuqukethwe kwe-calcium nama-amino acid, futhi umkhiqizo ezihlwabusayo kakhulu. Nokho, ukulungiselela ushizi ekhaya ngenxa ambalwa. Kuthatha isikhathi eside ukuba silondoloze ukuqinisekisa ukuguga. Ngesikhathi esifanayo waphawula isisindo nenqubo: lokushisa, umswakama, ukukhanyisa.
Ngaphezu kwalokho, umongameli wokuqala uzothola kuka izinyanga ezimbalwa. Kodwa uma balinde isikhathi eside kangako awukwazi, kodwa ngempela ufuna ukuthatha ushizi ke banake izinhlobo esithambile. Namuhla sikhuluma kanjani ukulungiselela Adygei ushizi ekhaya, kanye ezinye izitsha kuwo ukunikeza izivakashi zayo.
Uma uthi nhlá, kungani ukuchitha isikhathi sakho lapho izinto zokusetshenziswa kusadingeka ukuthenga, ukuthi ziyasebenza esitolo akulula? Kubonakala kanjalo, kodwa ushizi ezikhiqizwayo ekukhiqizeni yesimanje - akuyona ukuthi umkhiqizo ewusizo futhi yemvelo ukuthi ngingathanda ukubona kudeskithophu yakho. Noma yimuphi usomabhizinisi unesithakazelo kuphela indlela ukuze uthole inzuzo esiphezulu, ngakho umkhiqizo osuphelile ungeze imibala nokunambitheka, ukunambitheka enhancers, futhi uhlobo, kanye nezivimbelakuvunda. Ngakho-ke, lo mkhiqizo ngeke kube isikhathi eside ilele counter zinjalo.
Shizi kwesokudla - lokhu umthombo ephelele amavithamini namaminerali, lokhu ukugxilisa ingqondo wonke umlaza izakhi, okuyinto idume ubisi lwayo. Kodwa ukulungiselela umkhiqizo eliphezulu kungaba yezandla zabo. Nokho, ngaphambi kokuqhubeka zokupheka, masikhumbule ukuthi ushizi othambile. Lena mkhiqizo silula ephethe ukunambitheka elula, okuyinto akunakwenzeka ukuba ukunxusa bonke abantu ngothi lwabo. Kodwa ngesikhathi esifanayo kuyasiza kakhulu. Futhi manje ake sixoxe ngokuningiliziwe indlela ukulungiselela Adygei ushizi ekhaya.
Sithola phansi ibhizinisi
Ngaphambi kokuya ukuzijayeza, kudingeka ufunde le mfundiso. Njengoba yingcweti le nqubo elula, uyokwazi ukujabulisa ekhaya ukudla kwabo esihlwabusayo futhi unempilo nsuku zonke. Ngezansi sizoxoxa ngokuningiliziwe kokuhle Adygei ushizi, ukupheka liphuma kulo ungasifaka kanjani isicelo. Okwamanje, kudingeka uthole ngingoweqa elibilile ubisi umkhiqizo.
Inqubo kakhulu efana ekukhiqizeni ushizi. Uzodinga 2 amalitha ubisi yasekhaya futhi 700 amagremu yogurt, usawoti kanye izinongo, kanye gauze Friend kanye colander. Kuleli nani khona 0.5 kg ushizi fresh futhi ewusizo. Inqubo yokukhiqiza elula. Thela ubisi zingene pan bese ulinda kuze Bubbles ngaphandle ezibonakala futhi plenochka. Ubilise akudingekile. Thela yogurt (ungakwazi engqondweni, ube yogurt ekhaya). Inqubo ukusonga nasemaceleni izigaxa serum kwakhiwa ejika kusuka elimhlophe ogqamile.
Manje ungakwazi ukuvala umlilo futhi kuvimbele emva kwamaminithi ambalwa. Manje udinga ukuthatha gauze obukhulu wakufaka colander. Top uthele ngokucophelela mass esishisayo, ufafaze usawoti kanye izinongo, ngobumnene enyakaza futhi tie ezihambisanayo. Lapho nje lo whey abakhwabanisi, gauze ne okuqukethwe awadlulisela phezu flat. Uma ufuna ome umkhiqizo, ungakwazi ijoka noma ushiye umongozima ngaphansi isisindo ayo. Aphole ekamelweni lokushisa, bese efakwa imbala. Wayelokhu esifushane kakhulu, izinsuku ezingu-5 kuphela, ngakho musa nje ukupheka ingxenye enkulu. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwenza bebodwa ushizi Adyghe. Yini ukupheka kuwo, sizobe ukukhuluma okwengeziwe.
Ngesizathu esithile, abantu abaningi bakholelwa ukuthi ukudla emangalisayo kufanele kuthathwe ushizi kanzima kuphela. Ngokuphambene, izinhlobo ezithambile aphansi in kilojoule, kuningi calcium ne amaprotheni, futhi ngaphezu kwalokho, bayakwazi ukunikeza izitsha ajwayelekile ithoni zikanokusho. Ngaphezu kwalokhu, nezela yokuthi ngokungafani kuya okuqinile futhi ungenza ushizi ngokwabo Adyghe. Yini ukupheka kuwo? Lo mbuzo kanye nempendulo. Ake uqale kusukela ekuqaleni.
Inketho elula - tortilla ushizi epanini ukuthosa. Ukuze wenze lokhu, uxove inhlama evamile. Uzodinga izinkomishi ezintathu impuphu 200 of amanzi abilayo. Kulezi izithako wayixova mass kanye roll nokunwebeka ngongqimba 3 mm obukhulu. Top nge ushizi ecubuziwe, Cindezela garlic. Manje butha bonke imiphetho futhi ngobumnene Roll futhi. Unganikeza sihloko wakho ube chebureks, lokhu ngeke kube nomthelela ukunambitheka. Bhaka kubo epanini ezomile futhi ngakugcoba ibhotela.
Kodwa hhayi kuphela amakhekhe singaba usizo kabi Adygei ushizi. Yini ukupheka kuwo, kungaba kuhle ukubuza Georgians. Kuyinto isithako ozithandayo cuisine sabo. Wonderful ophaya Ossetic, namabhanisi enongiwe babe amakhono ekhaya lakho.
Uwayehlalise ngeke unezinkinga dinner okumnandi, uma esiqandisini has Adygei ushizi. Yini ukupheka kuwo? Zama isidlo esishisayo, angasetshenziswa njengendlela dish side noma isidlo esikhulu. Uzodinga 1.5 izinkomishi irayisi. Kumele abilisiwe kuze ithenda. Manje ukulungiselela izithako main. Ngo-pan, ancibilike 3 tbsp. spoon ibhotela Fry onion kuwo, uthathe izindandatho. Hlanganisa ushizi, futhi imizuzu embalwa - 2 pepper ezinoshukela, imibengo zibe emapheshana. Zonke mix engeza irayisi. Ngakho-ke kungaba usizo ngasethunjini okusheshayo ushizi Adygei. Yini ukupheka kuwo, ake sicabangele lo olandelayo.
Esondela iholide, futhi ukuphinda etafuleni ngonyaka odlule sebekubeke ungafuni? Zama emangalisayo inkukhu drumsticks nge ukugcwaliswa Creme. Ngakho, ake siqale. Uzodinga amakhilogramu fresh futhi umbala kahle wageza. Kuyadingeka ukuba ulungiselele, okusho ukwenza emaphaketheni ngaphansi kwesikhumba. Manje sekuyisikhathi ukukhumbula isithako imfihlo. Ngokuvamile, ngaphandle yokuthi kungenzeka ukulungiselela kusuka Adygei ushizi, abapheki abaningi nje ukukhumbula kakhulu ithenda pasta, lapho sihlanganisa garlic, dill namafutha omnqumo. Konke lokhu ngesiswebhu in a blender kanye noshizi, bese uya sandwich noma amakhekhe. Kulokhu, soft abakhonza ingxube ukugcwalisa tibia. Ngemva kwalokho, ngomusa, bopha futhi uthumele emapheshana ubhekeni kuhhavini.
Lapho omunye uhlola cuisines zomhlaba, omunye nezimangaliso nje eziningi kanjani kukhona ongakhetha ezenza kusukela Adygei ushizi. Indlela walethwa resort kungaba ozithandayo iminyaka eminingi ezayo. Ngakho, ukulungiswa izinhlanzi edingekayo ushizi, nori ulibangisa sushi. Inqubo silula. Ushizi uthathe yizicucu oblong, bese amashidi green zisakazwa ipuleti e ayaphenduka kancane oswakanyiswe amanzi. Manje twirl it like a uswidi, futhi emaphethelweni kuthiwa oswakanyiswe futhi zaschipyvaem. Kuhlala kunjalo amancane. Lungiselela Batter elula, kuyoba ufulawa namanzi, uma uthanda, ungakwazi ukufaka amaqanda noma ushizi. Kukhona izimvilophu bacwilisa in Batter kanye gazinga in a Skillet.
Akukona konke ingalungiswa kusukela ushizi Adygei. Ungadliwa ingalandwa ukuphila futhi mangaza abangane nge izitsha ezintsha.
Ngithi lokho ukukhonza? Yini ukukhonza inyama, inhlanzi, inkukhu, chops, izimfanzi, ushizi, salmon, amazambane. Yini ukuba baphuze champagne, iwayini
Ukhilimu Clotted - kuyini? Zama wona futhi ngeke uzisole
How fast benze izifundo nge mladsheklassnikov
Indlovukazi u-Elizabeth Elite Sui 5 (Turkey / Kemer): isithombe, amazinga nokubuyekezwa
Njengoba kungaba okumnandi carp kubhakwa
I ingcina polymer-injongo "Dragon": izici, imininingwane isicelo kanye nokubuyekeza